C Purlin duudduuban mashiinka la xirrira - Shiinaha Wuxi Linbay Makiinado
Description: C Tani / U Purlin Roll U samaynta Machine, soo saari karaan qaab C iyo qaabka U purlins ka 100-400mm of width iyo si fudud in la beddelo spacers. oo dhumucdiisuna waxay ugu badnaan la abuuri karaa at 4.0-6.0mm. Oo weliba waxaannu ku qorshayso karaan mishiinka si ay ula width mid ka mid ah purlins iyo channels ugu weyn shaqeeyaan, si toos ah u hagaajin karo by gacanta PLC ama qabsato wheel xamili in la beddelo width xaashida. Tani waa ka badan ayaa si fudud u badan qabsato spacers iyo badbaadin kartaa waqti badan. Marka laga unit goynta, waxaad dooran kartaa xannaanada ...
Tani C / UP urlin Roll Machine U samaynta , waxay soo saari karaan qaab C iyo qaabka U purlins ka 100-400mm of width iyo si fudud in la beddelo spacers. Oo dhumucdiisuna waxay ugu badnaan la abuuri karaa at 4.0-6.0mm.
Oo weliba waxaannu ku qorshayso karaan mishiinka si ay ula width mid ka mid ah purlins iyo channels ugu weyn shaqeeyaan, si toos ah u hagaajin karo by gacanta PLC ama qabsato wheel xamili in la beddelo width xaashida. Tani waa ka badan ayaa si fudud u badan qabsato spacers iyo badbaadin kartaa waqti badan. Marka laga unit goynta, waxaad dooran kartaa ka-cut pre ama nidaamka cut.The post wadista qaadanayo nidaamka gimbal haddii wax xumu waa ka sii dhumuc weyn 2.5mm, this wax badan oo xoog driving xoog leh oo ka xasilloon marka la xirrira purlins ah.
C / U Purlin mashiinka duudduuban la xirrira
waxyaabaha ku haboon
Nooca: galvanized gariiradda, PPGI, Carbon steel gariiradda
Dhumucdiisuna (mm): 0.4-0.6, 1.5-3, 4-6
Dhali xoogga: 250 - 550MPa
stress Tensil (MPA): G350Mpa-G550Mpa
xawaaraha la xirrira magaceed (m / min)
10-25 Ama sida uu sheegay aad looga baahan yahay
saldhiga la xirrira
decoiler Manual decoiler Haydarooliga ama decoiler double madaxa
motor mashiinka Main
Brand Sino-Jarmal Siemens
Rollers ' materail
Qaab dhismeedka Station
Idaacadda guddi Wall Been abuurtay Iron stationOr Torri dhismeedka taagan
No Idaacadda feer Haydarooliga ama jaraa'id feeray
korontada looga baahan yahay
380V 60Hz Ama sida uu sheegay aad looga baahan yahay
buluug warshadaha Ama sida uu sheegay aad looga baahan yahay
Previous: Z Purlin mashiinka duudduuban la xirrira
Next: line dhagax wax beebka caaga FG20
macaamiisha Isbaanish helay uu mashiinka fadhiyey ...